Sagrada Familia Apartment eneA/C kunye neWifi: irenti yenyanga
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIllacat Apartments
Ibekwe ngokugqibeleleyo izinyuko ezimbalwa ukusuka eSagrada Familia, le ndlu iqeshelwe ukuhlala ngaphezulu kobusuku obungama-32 kwaye iyacetyiswa nge-2, nangona inokuhlala abantu aba-3. Igumbi lokulala eli-1 kunye negumbi elinye lokulala eli-1 elincinci, igumbi lokuhlambela elincinci elineshawa, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa, itafile yokutyela, iTV kunye ne-air conditioning. Wifi. Amanzi kunye neWifi zibandakanyiwe kwixabiso kwaye umbane udityaniswe nomda wenyanga wama-300kwh. Amagumbi ajonge ngasemva kweso sakhiwo.
Kukho amagumbi ama-6 alolu hlobo (ejongene nomva wesakhiwo) kwisakhiwo esifanayo kwaye amagumbi abelwe iindwendwe ngendlela efanayo namagumbi abelwe ehotele - aqeshwa njengeentlobo kwaye kungekhona njengeeyunithi ezithile, kwaye iifoto zimele uhlobo (ezinye iinkcukacha zinokwahluka). Ukuba urenta le ndlu uya kuhlala unikwa indawo ejonge ngasemva kweso sakhiwo.
Ngenxa yezitepsi kunye nezinyuko ezimxinwa, asiyicebisi le ndlu ukuba usapho luhlale nabantwana, ngakumbi iinyanga ezi-0-12, ngelixa usebenzisa ipram enkulu.
Amagumbi abekwe e-Avinguda Gaudí, isitrato esihamba ngeenyawo, esigcwele iindawo zokutyela kunye neendawo zokuhlala kunye nemibono enomtsalane ye-Basilica. Indawo yaseSagrada Familia yenye yezona zinto zikhethwa kakhulu zokuhlala e-Barcelona, ngenxa yokusondela kwayo kwezinye iindawo ezinomdla wabakhenkethi, kunye nezitrato zayo zokuhamba, iipaki, iindawo zokutyela, iiterraces. Kunxibelelene kakuhle nesixeko sonke kunye nemigca engaphantsi kwemibini kunye neebhasi ezininzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Illacat Apartments
Xa uqinisekisa ugcino lwakho, siya kukuthumelela i-imeyile enemiyalelo yokufika. Sinenombolo yefowuni yongxamiseko yeeyure ezingama-24 eya kunikwa xa ufika kwaye unokubizwa ukuba unayo nayiphi na ingxaki ngexesha lokuhlala kwakho. Abathengi bethu bayayixabisa indawo yokuhlala, ukucoceka kunye nezixhobo, kunye nenkonzo yethu yabathengi.
Xa uqinisekisa ugcino lwakho, siya kukuthumelela i-imeyile enemiyalelo yokufika. Sinenombolo yefowuni yongxamiseko yeeyure ezingama-24 eya kunikwa xa ufika kwaye unokubizwa ukuba u…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R5411